VIDEO: Axmad Madoobe oo ugu dambeyn Is dhiibay Quusna taagan Maxaase Xigi doona? – Kismaayo24 News Agency
by admin 26th August 2018 27th August 2018 0328
Hoggaamiyaha Gabalkiisa uusii dhacaayo ee Jubbaland Axmad madoobe ayaa walaac xoogan ka qaba kacdoonka isaga looga soo horjeedo ee ku si baahaayo deegaannada jubbaland.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhaw dhaw madoobe ayaa inoo xaqiijiyay in axmad madoobe uu damacsanyahay qorsha uu kaga fiirsanaayo kacdoonka isaga ka dhanka ah waxaana macquul ah in uu wajaho culeys ka xoog badan kan hadda heysta.
Mas’uuliyiinta ayaa sidoo kale inoo sheegay in haddii xaalka uu sidaan sii ahaado ay madoobe ku qasbi karto in uu xilka baneeyo waxaana uu hadda wadaa la tashiyo uu la sameynaayo beeshiisa iyo siyaasiyiin isaga ku dhaw dhaw.
Waxgaradka beesha uu kasoo jeedo axmad Madoobe ayaa u sheegay in haddii kacdoonka shacabka uu sii baaho ay ceeb iyo dhabar jab ku noqoneyso axmad madoobe waxaana hadda madoobe horyaala laba darran mid dooro oo uu baneeyo kursiga ama uu ku dhega adeego in uu kismaayo xoog kusii heysto dulmigana uu sii kordhiyo.
Guud ahaan deegaannada jubbaland waxaa gaaray kacdoonka dib u xoreynta jubbaland waxaana maalintii seddexaad dagmooyinka tirsan Jubbada hoose iyo Gedo ka dhacay Dibad baxyo waaweyn oo axmad madoobe looga soo horjeedo.
Dibad baxyada ayaa la sheegaya in aysii socon doonaan ilaa inta meesha laga saaraay axmad madoobe waxaana xubnaha horboodaya kacdoonka xoreynta jubbaland ay wacad ku mareen in aysan marnaba nasan doonin ilaa iyo shacabka jubbaland laga dulqaado dulmiga ragaadiyay ee sanado badan uu maamulka axmad madoobe ku haayay shacabka.
Ciidamadii Xasilinta oo Muqdisho dib loogu soo celiyay ( Sidee wax u jiraan?)
DEG DEG: Maxaadan ogeyn oo halisteeda oo hada laga soo sheegaya deegaanka Goob-weyn ee duleedka Kismaayo??